Turkiga oo shaacisay in Dowlada Somalia ay ugu deeqeyso dhaqaale xoogan | TOP NEWS
Turkiga oo shaacisay in Dowlada Somalia ay ugu deeqeyso dhaqaale xoogan
Ra’iisal Wasaare ku xigeenka dalka Turkiga ayaa sheegay in Dowladdiisa ay Somaliya siisay gar gaar qiimahiisu ku kacayo $1 Bilyan oo Doollarka Mareykanka ah tan iyo 2011-kii oo uu biloowday howlagalka samafalka Turkiga ee Somaliya.
Mehmet Simsek oo ka hadlaayay kulan ay yeesheen Wasiirrada Maaliyadda waddama G20,sidoo kalena ay ka qayb galayeen Gudoomiyayaasha Bangiyada Waddamada G20,ayaa waxaa uu ka sheegay in qorshaha horumarinta Turkiga ee Afrika ay muhiim u tahay Dowladdiisa dadaal badanna ku bixineyso waddamada Afrika.
Shirakan oo ka dhacay magaalada Baden-Baden ee Dalka Germany horudhacna u ah kulanka Madaxweynayaasha Waddamada G20,ayaa waxaa uu Ra’isalwasaare ku xigeenka Turkiga ka sheegay in Qaaradda Arfirka ay tahay Dhaqaalaha Dunida ee 100 Sano ee soo socota loona baahan yahay in hadda laga sii fakaro saameyn ku yeelashada Qaaradda.
“Maxay Qaaradda Aasiya u tahay dhaqaalaha Adduunka maanta?,haddii ay tahay Tiirka dhaqaalaha Caalamka Aasiya maxaa diidaya in Afrika ay noqoto tiirka dhaqaalaha Adduunka 100 Sano ee soo socota,waana ay u egtahay” ayuu sii raaciyay Ra’islawsaare ku xigeenka Turkiga Mehmet Simsek.
Waxaa uu sheegay in Turkiga uu horumar Diblomaasiyadeed ka sameynayo Qaaradda Afrika waxaana uu tusaale u soo qaatay in 2004tii uu Turkiga ku lahaa Afrika 12 Safaaradood oo kaliya halka maanta uu ku leeyahay 39 Safaaradood taas oo uu ku sheegay in Turkiga uu istiraatijiyad fog ka leeyahay Afrika.
Wasiirrada Maaliyadda iyo guddoomiyayaasha Bangiyada dalalka G20 ee ugu dhaqaalaha badan Adduunka waxaa ay April iyo October isugu tagi doonaan kulanka Sanadlaha ah ee IMF-ta ee Washington DC.
Turkiga oo shaacisay in Dowlada Somalia ay ugu deeqeyso dhaqaale xoogan added by Tifaftiraha Somalida Maanta on March 20, 2017